FAKA ISINXUSO NOMA ISIKHALAZO NGOKUGCWELE | Local Government Action
Faka isinxuso noma isikhalazo ngokugcwele
Ngaphezu kohlu lwezikhalazo ezibhaliwe, ukumasha, ukubhikisha nemihlangano zikhona ezinye izindlela zokuphoqelela amalungelo akho. Unelungelo lokufaka isicelo sokudlulisa isinqumo uma kunesinqumo esithathwe umkhandlu noma abasebenzi bawo, ngokuya enkantolo noma uqonde kwesinye sezikhungo eziqaphayo ezisungulwe uMthethosisekelo, njengeKhomishana lamaLungelo abaNtu noma uMvikeli woMphakathi.
Isigaba 62 soMthetho weziNhlelo zoMasipala siveza inqubo yokudlulisa isinqumo. Ungakwazi:
ukudlulisela udaba kumphathi kamasipala uma inkinga oyibikile ingaxazululekanga
ukwenza isikhalazo kumphathi kamasipala uma abasebenzi bahulumeni bengayilandela inqubo yokuziphatha
udlulisele kumkhandlu kamasipala uma umphathi kamasipala wakho enza isinqumo ongavumelani naso noma ehluleka ukubuyela kuwena
enza isikhalazo kwiLungu loMkhandlu oPhethe elibhekele ohulumeni basekhaya (elaziwa ngeLungu loMkhandlu oPhethe kohulumeni basekhaya) uma umkhandlu kamasipala uhluleka ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi bawo balandela imithethodolobha, inqubomqomo, noma umthetho noma uhluleka ukuhlomulisa noma ukuqapha ithenda ngendlela efanele
ukwenza isikhalazo kwi-COGTA (umnyango kazwelonke obhekele ohulumeni basekhaya) uma uhulumeni wesifundazwe engakuphenduli ngendlela efanele.
Indlela yokudlulisa isinqumo
Bhala incwadi enemininingwane yesikhalazo sakho – ungakhohlwa ukufaka izinsuku kanye namagama abantu okhulume nabo kanjalo nalokho enikudingidile, kanye neminye imibhalo noma izincwadi
Hambisa incwadi yakho kumphathi kamasipala zingakapheli izinsuku ezingama-21 ngemuva kosuku owaziswa ngesinqumo ngalo. Qinisekisa ukuthi uthola umbhalo wokuvuma ukuthi uyamukelile incwadi yakho!
Uma sewufake incwadi yokudlulisa isinqumo uhulumeni kumele aqoke abantu noma ikomidi elizodingida incwadi yakho yokudlulisa isinqumo. Lokhu kufanele kwenzeke engakapheli emasonto ayisithupha. Emuva kwalokho unelungelo lokuthola isinqumo esikhathini esifanele. Uma uphikisana nesinqumo sophiko oludingida incwadi yokudlulisa isinqumo ungafaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo enkantolo.
IKhomishana lamaLungelo abaNtu